Xakamaynta iyo xalinta dhibaatada fog - MediaLight Eex Laydhka
Xallinta cillad-yare iyo fog
Waxaan diyaarinay liistada talaabooyinka cillad bixinta ugu badan ee lagu xalliyo arrimaha liita.
Waan ka xunnahay in su'aalaha qaarkood ay u muuqdaan nooc iska cad, laakiin tallaabooyinka ayaa loo taxay sida ugu habboon ee xalalka ugu habboon. Si kale haddii loo dhigo, inaadan leexan korantada la shido dhab ahaantii waa arrinta # 1.
Haddii mid ama in kabadan oo talaabooyinkan ah aysan xalin dhibaatada, waxaan dardar galin doonnaa badelka fog oo adiga kugu yare.
1) Awooda la shiday ma daaran tahay?
Hadday haa tahay, fadlan sii nalka in ka badan dhowr ilbiriqsi si aad uga jawaabto markii ugu horreysay ee ay daaraan. Mararka qaarkood waxaa jira dib u dhac koronto marka nalalka lagu xiro qalab cusub.
2) Haddii aad ka socoto telefishanka / shaashadda / kombiyuutarka, qalabka ma daaran yahay? Qalabyo badan ayaan siinin awood markii qalabka la xiro (qaar baa sameeya, taasina waa arrin kale oo gebi ahaanba). Dareeraha ma shaqeyn doono marka aysan awood u laheyn dekedda USB-ga.
3) Miyuu cabirku ku xiran yahay? "Kantaroolaha LED" ee ku jira kiishka mayalka adag ee fog fog ayaa leh Waxay u baahan tahay in lagu dhejiyo. (Sababta 2aad ee ugu badan ee fog ee aan shaqeynin 😂).
4) Miyay jirtaa aragti cad oo udhaxeysa dimmerka? (Miyaad aragtay fiidiyowgaan oo leh tilmaam meelaynta?)
5) Waa maxay isha korontada oo ma isku dayday adoo adeegsanaya adabtarada kujira? (Qeyb kasta laakiin Mk2 Eclipse waxaa ku jira adabtarada Mareykanka). Haddii uusan ku shaqeyneynin awoodda TV-ga miyuu ku shaqeeyaa adabtarada? Dhibaatooyin badan ayaa sababa marka la isticmaalo ilo koronto oo aan ku filnayn. Xusuusin: Lacag dhaqso ah (oo badanaa lagu calaamadeeyo Q leh hillaac) adapters-ka waxay wax ka beddelaan awoodda (si loo dadajiyo in bateriga lagu buuxiyo). Waxay sababi karaan gariir iyo sidoo kale waxay u horseedi karaan aaladda hagista inay cillad gasho inta lagu dhagan yahay
6) Fadlan runtii iska hubi inaad isku dayday ilo awood oo ka duwan (aan ka ahayn kormeeraha, TV-ga, kombiyuutarka ama adabtarada aad isticmaaleysay markii ugu horeysay).
7) Ka dib markaad koranto oo aad ku xirto adabtarada, fadlan sug 1 daqiiqo ka dibna riix badhanka dabka / dabka 10 jeer inta aad kuxirantahay adabtarada kujira. Nalalka ma falceliyaan? Mararka qaarkood, waxay qaadataa illaa 3 ilbidhiqsi in nalku uu shito markii ugu horreysay markii la isticmaalayo adabtarada. Tan waxaa lagu magacaabaa "dib u dhigga korantada" waxayna dhici kartaa marka la isticmaalayo adabtarada ku jira, ama marka lagu xiro TV-gaaga. Badanaa waxay dhacdaa oo keliya marka ugu horreysa ee aad isticmaasho ama haddii aadan muddo dheer isticmaalin.
Haddii arimahan aysan xallin dhibaatadaada kontoroolka fog, cirifka ayaa laga yaabaa in la shiilay oo waxaan kuu soo diri doonnaa beddelaad. Nagala soo xiriir chat ama foomka xiriirka hoose.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, Qulqulayaashu waxay daboolayaan 5 sano, markaa ha ilaawin inaad nala soo xiriirto haddii tani mar kale dhacdo.
Ugu dambeyn, fadlan ii sheeg aqoonsigaaga amarka iyo cinwaankaaga. Mahadsanid! Waxaan ula soconaa arrimaha amar ID si aan u aragno haddii ay jiraan isbeddello na bari kara sida loo hagaajiyo arrimaha mustaqbalka mana waligeen u maleyneyno in qofna uusan dhaqaaqin tan iyo markii ay amreen.